Malaizia: Toby fanazarana “hanampiana” ny zazalahy manao toetram-bavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2011 5:40 GMT
Noho ny fahazarany somary manao fombam-behivavy, nalefa tany amin'ny toby fanazarana ny tovolahy mpianatra 66 avy amin'ny fanjakan'i Terengganu mba “hanampiana azy ireo hitondra tena amin'ny tokony ho izy”.
Manoratra ny New Straits Times:
“Nanomboka omaly ny efatra andro tany tany amin'ny toby fanazarana ao Besut, voalohany tontosaina tany. Izany dia mba hanampiana ny famahana ny olana atrehan'ireo tovolahy mpianatra amin'ny ambaratonga faharoa.
“Nataon'ny sekoliny lisitra izy ireo, izay nilazàna tamin'ny taon-dasa mba hijery ireo mpianatra manao toetram-behivavy, hoy ny talen'ny departemanta Razali Daud.
Nilaza izy fa natao izany ezaka fanarenana izany noho ny fisondrotan'ny isan'ny tovolahy mpianatra misarim-bavy ao amin'ny fanjakana.
“Miovaova ny hamafin'ny tranga, fa ireo tovolahy mpianatra 66 kosa dia naneho fitondrantena izay tsy mahazatra loatra ho an'ny tovolahy amin'ny taonany.”
Tao amin'ny lahatsoratra iray hafa navoakan'ny The Star, ny Minisitry ny Vehivavy sy ny Fianakaviana ary ny Fandrosoan'ny Fiaraha-monina, Sharizat Abdul Jalil dia milaza fa tokony hofoanana izany toby fanazarana izany:
“Mazava fa fandikàna ny lalàna momba ny ankizy izany,” hoy izy, ary nanampy fa araka io lalàna io dia manan-jo harovana sy hampiana amin'ny fotoana rehetra ny zaza ny zaza tsirairay, tsy mifidy toetra izany na rasa, na tenim-pirenena, na tsy fetezana ara-tsaina sy ara-toe-po.
Nozarazarain'izany olana izany ny tontolon'ny blaogy any Malaizia. Manoratra i Whimsical Lair :
Tena mieritreritra aho fa tokony hisy fizaràna tsara eo amin'ny moraly / lalàna / politika / fivavahana. Raha mitandro ny filaminana no adidin'ny governemanta any amin'ny firenen-drehetra (niteraka ny fahasarotan'ny fanavahana ny lalàna sy ny politika), manan-jo marina handidy ny fitsipika sosialy sy ny moraly ve izy? Ny fahalalahana maneho hevitra (na amin'ny teny na amin'ny fihetsika), raha mety ho tena sarotra ny fanenàm-pandeha mba hitandroana ny filaminana, mieritreritra marina ve ny governemanta fa manan-jo izy hijabaka amin'ny fomba tiako hamindràna, hihinanan-kanina, hieritreretana, hitiavana, sns?
Mbola mitsipaka ny olona mitovy nefa mifanambady ny Malaiziana sasany. Manazava i Ugly Malaysiana :
tsy dia raharahiako loatra raha lasa “gay” ny olona iray na tsia, tsy olana izany, mamela vehivavy bebe kokoa ho ahy izany, nefa mbola miasa saina aho, mba eritrereto anie raha lasa “gay daholo ny olombelona rehetra e? inona no hanjo amin'ity tany ity? inona no hataonao amin'ny fitohizan'ny taranakao? zaza amboarina anaty tavoahangy? oohhh… eny mitsipaka ny “gay” aho, tsy mino an'Andriamanitra ilaisany, izay ianareo, maharikoriko ny olona “gay”, teboka.
Ao amin'ny Twitter, @motivationMY dia manontany ireo mpanaraka azy ny hevitr'ireto farany momba ny toby, indreto ny sombiny amin'ireo valinteny:
@niennessa: hahatonga azy ireo ho voahilikilika noho ny efa mahazo azy izany. Minoa ahy fa tsy hitondra soa ho an'iza na iza ny hevitra adala toa izany.
@weejunt: Mety vao mainka hanakorontana ny sainy sy hahatonga azy hanohitra ny fahefàna ny fanavahana azy ireo tahaka izany
@fabiannarcis: Mila namana sy olona mahazo azy ireo fa tsy fanampiana
@sherylhosulynn: amiko izany dia tsy misy fotony sady endrika fanaovana tsindry hazolena ny fanehoana ny maha-izy ny olona!
Taorian'ny tsikera betsaka avy amin'ny sehatra samihafa, milaza i Razali Daud, talen'ilay tetikasa toby fanazarana, tao anatin'ny fanambaràna farany nataony ho an'ny mpanao gazety
[…] ity tetikasa ity dia mikendry ny hampietsiketsehana ny fahatokisan-tena ao amin'ireo mpianatra izay tsy mandray anjara amin'ny hetsika ara-panatanjahantena sy ivelan'ny fianarana, fa nanjary noraisina ho toby fanazarana ho an'ireo zazalahy sarimbavy izany.”